RB Leipzig oo heshay booskeeda Europa League kaddib markii ay ka adkaatay Man City, xilli PSG ay xasuuqday Club Brugge… +SAWIRRO – Gool FM
RB Leipzig oo heshay booskeeda Europa League kaddib markii ay ka adkaatay Man City, xilli PSG ay xasuuqday Club Brugge… +SAWIRRO
Dajiye December 7, 2021
(Yurub) 07 Dis 2021. Manchester City ayaa guuldarro kala soo kulantay kooxda RB Leipzig oo ay booqatay kaddib marki loogu soo awood sheegtay 2-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada lixaad wareega group-yada ee tartanka Champions League, taasoo ka dhigtay in RB Leipzig ay heshay booskeeda Europa League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee RB Leipzig.
Daqiiqadii 24-aad kooxda reer Germany ee RB Leipzig ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda Dominik Szoboszlai kaddib markii ay caawin kaga timid saaxiibkiis Konrad Laimer.
71 daqiiqo marka ay dheesha mareysay André Silva oo caawin ka helay saaxiibkiis Emil Forsberg ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda RB Leipzig.
Laakiin daqiiqadii 76-aad Manchester City ayaa dhalisay gool waxaana 2-1 ka dhigay dheesha Mahrez kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Zinchenko.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 2-1 ay kaga adkaatay RB Leipzig kooxda Manchester City oo marti u ahayd, xilli kulankan uu ahaa kulankii lixaad ee ugu dambeeyay group-ka A, waxaana ka soo gudbay labada kooxda Man City iyo PSG.
Dhinaca kale kooxda Paris Saint-Germain ayaa 4-1 kaga adkaatay kooxda Club Brugge, waxaana goolasha u kala dhaliyay Kylian Mbappé iyo Lionel Messi oo min 2 gool ah.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Inter ee tartanka Champions League oo la shaaciyey
Kooxaha Real Madrid iyo Liverpool oo guulo gaaray & guud ahaan natiijooyinka kulammadii caawa laga ciyaaray tartanka UCL… SAWIRRO